मीठो निद्राका लागि अपनाउनुस् यी १० उपाय स्पेसखबर
'स्वस्थ शरीर र मानसिक सुखका लागि योग' उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले स्वस्थ शरीर र मानसिक सुख वा आत्मिक शान्तिका लागि योग अचुक माध्यम बनेको बताएका छन् । उनले योगले रोग लाग्नबाट बचाएर हामीलाई स्वस्थ रहन मद्त पुर्याउँने ...
धरानमा डेंगु परीक्षणकाे नाममा मनोमानी, निजी ल्याब मालामाल! डेंगुको प्रकोपका कारण बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा बिरामीको चाप बढेपछि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले परीक्षणको नाममा लुट मच्चाइरहेका छन्।
विवाह गर्ने उमेर नहुँदै गर्भपतन गराउने बढे जिल्लामा बिहे गर्ने उमेरअगावै गर्भपतन गराउने किशोरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको कानुनमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।
५० पुगेपछि यति त गर्नै पर्ला ! (१५ सुझाव) उनीहरुको आउने जीवनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । अहिले पहिलेजस्तो समय छैन । अघिल्लो जन्मको कर्जा पछिल्लो जन्ममा चुकाउनुपर्छ । तर, आधुनिक युगमा सबैकुरा हातहातै छ ।
यसरी हटाउनुहोस् डन्डिफोर तपाईंलाई डन्डिफोरले सताएको छ ? सुन्दर देखिने चाहनालाई डन्डिफोरले तगारो लगाइदिन्छ । अनुहारमा आउने डन्डिफोरले सताएको छ भने सामान्य घरेलु उपचारबाटै यसको पीडाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । डन्डिफोरबाट छुटकारा ...
डेंगुको नाममा जथाभावी परीक्षण : एक सय पर्ने किटको १३ हजारसम्म असुली परीक्षणमा भएको मनपरी रोक्न महाशाखाले मापदण्ड बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थालाई सर्कुलर जारी गरेको छ । ‘बिरामीसँग निजी स्वास्थ्य संस्थाले मनलाग्दी रकम असुल्ने गरेको र जथाभावी परीक्षण गरेको गुनासो आएपछि हामीले मापदण्ड ...
नेपालका ४५ प्रतिशत महिला झुक्किएर गर्भवती २१औँ शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् ।
चिनी पनि चुरोट जस्तै 'हानिकारक' गएको दशकमा धूमपानलाई सीमान्तकृत र कलङ्कित बनाइएको छ । ब्रिटेनमा सन् २००७ मा धूमपान प्रतिबन्धित गरियो, त्यसको एक दशकपछि सामान्य खोल राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । त्यो सबै मानिसहरूलाई ...
फलको राजा आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? होसियार ! फलको राजा आँपलाई मानिन्छ। अब आँपको सिजन आउन थालेको छ। तर, बजारमा छ्यापछ्याप्ती आँप आउन थालिसकेका छन्। व्यापार पनि बढेको छ। असार, साउनतिर पाक्ने आँप अहिले बजारमा पाइन थालेको ...
भारतमा १ करोड लाग्ने कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमा २५ लाखमै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । ३ वर्षको प्रयासपछि शुक्रबार प्रत्यारोपण गर्न चिकित्सकहरु सफल भएका छन् ।
प्रदेश ५ मा १८५ औलो रोगी प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालयले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको औलो (मलेरिया) रोगसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा १ सय ८५ औलो रोगी भेटिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
धरानमा डेंगु प्रकोप धरानस्थित बीपी कोइराला स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेंगुका बिरामी बढेका छन् । तीन सातायता ५० बिरामीले उपचार गराइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ मा १८५ औलो रोगी भेटिए प्रदेश नं ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत प्रदेश नं ५ स्वास्थ्य निर्देशनालयले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको औलो (मलेरिया) रोगसम्बन्धी अन्तरक्रियामा १८५ औलो रोगी भेटिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।